Haddii aad muddo dheer ku riyootay bisad, laakiin waxaad xasaasiyad ku leedahay timaha miisaanka, ka sokow, waxaad doorbidaa xayawaanka rabbaayad ah, ka dibna xaqiiqdii ma awoodi doontid inaad diidid Don Sphynx. Tani waa dhalinyaro aad u dhallinyaro ah ayaa si dhaqso ah u helaya caan ku ah adduunka oo idil. Aynu ku baraarugno jaangooyadan aan caadiga ahayn.
Cats of Don Sphynx jilicsan, oo ka duwan sida sphinxes Canadian, waxay gebi ahaanba ka baxeen dhogor. Kittens ayaa ku dhalan kara fuuqbax, laakiin ugu badnaan laba sano ayaa sphinx lagu qaawan doonaa gebi ahaanba.
Wakiilada ilayskani waxa ay gaaraan qaangaadhka galmada 9-12 bilood. Nafaqada ugu horreysa ee Don Sphynx waa inay qaadataa ilaa hal sano iyo badh, haddii kale dhibaatooyin ayaa dhici kara goor dambe inta lagu guda jiro hawshan. Haddii aad go'aansato in aad ku dhalatid Don Sphynx, markaa waa inaad diyaariso wax walba kahor: raadi aroos, walaac ku saabsan dhammaan talaalada lagama maarmaanka u ah iyo dilaaca, iwm.
Uurka ee Sphynx sida caadiga ah waxay u dhacdaa sida caadiga ah, iyada oo aan lahayn dhibaatooyin. Waxa ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad si taxadar leh ula socoto caafimaadka bakeeriga, maaha inaad u oggolaatid qorshe iyo infekshin, sida xiliga uurka, bisadku waxay yareeyaan difaac. Dadaalka Don Sphynx ayaa sidoo kale si fudud u gudubta. Carruurta dhawaan dhashay ee Don Sphynx badanaa waxay ku dhashaan timo gaaban, taas oo markaas "la tuuray." Indhaha oo ku jira ilmo yar oo furan, 3-4 maalmood
Daryeelka loogu talagalay ilamaha geela Don Sphinx
Kittens ka Don Sphynx ayaa si dhakhso ah u kobcaya. Daryeelka aan caadi ahayn ee iyaga looma baahna. Daryeelka maqaarku wuxuu ka kooban yahay toddobaadlaha wiishka iyadoo la adeegsanayo shaambo gaar ah (ama carruurta).
Fikrad gaar ah waa in la siiyaa indhaha caruurta. Maadaama ayan haysanin maqaarka, waxaa lagama maarmaan ah 2-3 jeer toddobaadkii si loo tirtiro indhaha ilamaha suufka suufka lagu rusheeyey biyo diiran oo diiran. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in si joogto ah loo nadiifiyo dhegaha badan ee kittens. Waxay ku ururaan dheecaan bunni ah, oo si sahlan loo nadiifin karo suufka qoyan. Ka bixitaankaas ma faragalinayaan ilamaha, waxay u baahan yihiin halkii ay ujeeddooyin qurxoon.
Quudinta quudinta ayaa ka fiican afar toddobaad. Sidii ugu horreysay, waxaad isticmaali kartaa hilibka hilibka lo'da iyo jiiska, wax yar ka dib waxaad bilaabi kartaa ukunta la kariyey, lakabyo iyo cunto qallalan oo tayo sare leh. Ku quudinta cayayaanka waa inay noqdaan lix jeer maalintii, lix bilood kadib waxaa loo wareejin karaa saddex cunto oo maalintii, sagaal bilood kadib - labo cunto maalintii.
Cuntada eyda qalalan ee loogu talagalay nuugyada yar
Sidee loo quudiyaa teraboorka Yorkshire?
Ka soo baxa caloosha bacda
Eyga ugu khatarta badan aduunka
Kiniinnada laga helo shilinta eeyaha
Sidee loo kala soocaa dharaartii gabadha?
Qadhaadhaha eeyaha oo taagan
Cuntada eeyaha ah "Happy Eye"
Maxaa la siinayaa Pomeranian Spitz?
Eygu wuxuu leeyahay saxaro madow
Origen for bisad
Cuntada qoyan ee bisadaha
Dharka Cocktail 2014
Xeerarka eeyaha socodka
Labbiska dharka isweydaarsiga xilliga jiilaalka
Baqshiish lacag ah adoo isticmaalaya gacmahaaga
Shuban kadib daawooyinka antibiyootikada - sida loo daaweeyo?
Ilmuhu wuxuu toosaa qaylada
Sidee loo xakameeyaa hareeraha saqafka?
Maxey Lady Diana ka fikireysaa Ingiriiska casriga ah iyo nolosha wiilkeeda?
Karbohidratka faa'iido leh
Albaabka hore ee Feng Shui
Sawir gacmeedka gacmaha
Dhallinyarada yaryar - jiilaalka 2016-2017
Waa maxay sababta runtu tahay dhunkashada?
Sidee loo kariyaa buraashka leh jeeriga?
Daaweynta gacanta - khalkhalka
Hydrogel dhirta - codsiga
Sidee loo aqbalaa naftaada?
Korontada kuleylka leh ee korontada ku shaqeysa ee crane
Makhaayad ka timid Svetlana Fus
Maxaad cuni kari weydo cystitiska?